Yenza imali ngethrafikhi yewebhu nge-U LIVE
Linganisa inzuzo yakho yokuthengisa ye-CPA ngohlelo lwethu lokuthengiswa ngakunye okuthengiswayo. Abasebenzisi beDrayivu baye kwisayithi yethu yokuxoxa noma kuhlelo lokusebenza futhi bazuze imali ngokuthenga kwabo.
Inethiwekhi ye-LIVE CPA ikuvumela ukuba wenze imali ngethrafikhi yakho yokuthandana, yabantu abadala ne-webcam ngendlela ethuthukisiwe. Sisebenza emhlabeni wonke futhi sisekela ukwenziwa kwasendaweni okungu-17 ukwandisa ukubekwa kwakho. Beka isixhumanisi esixhumene nomuntu kuwebhusayithi yakho noma kwenye indawo ukwenza inzuzo. Thola imali kukho konke okuthengiwe okwenziwe ngabasebenzisi abakutholayo nemali engenayo eyenziwe ngabasakazi abadluliselwe kanye nabalingani.
kokuthengiwe ngakunye okwenziwe ngabasebenzisi abathunyelwe
yemali engenayo eyenziwe ngabasakazi abahambisana nabo nabalingani bethu
Beka ingxoxo ye-L LIVE kuwebhusayithi
Shumeka i-chat chat yethu bukhoma kwiwebhusayithi yakho ukwandisa isikhathi sokuhlala nokukhulisa amazinga. Le yindlela elula yokwenza imali iwebhusayithi / yokuthandana nabantu abadala ngoba i-AdSense ayikuvumeli okuqukethwe okunjalo ukuthi kugqugquzelwe. Ozakwethu nabaphathi bewebhu beqembu lesithathu, abavumela abasondelene nathi ukuthi bashumeke ingxoxo yethu ye-webcam kwizisetshenziswa zabo bazokwamukela imigomo yohlelo efanayo. Vakashela imenyu yohlelo lokuhambisana kuwebhusayithi noma kuhlelo lokusebenza lwe-Android ukuthola nokukopisha ikhodi yokushumeka.
Ingxoxo ye-U LIVE engahleliwe iyatholakala kuma-desktops, ama-smartphones kanye namathebulethi.
Sebenzisa noma isiphi isiphequluli osithandayo
Uhlelo lwethu lokusebenza lwe-chat roulette lusebenza kahle kuzo zonke iziphequluli ezithandwayo.
Akukho ukufaka okudingekayo
Zonke izici ziyatholakala kusiphequluli, akudingeki ukuthi ufake uhlelo lokusebenza leselula noma isandiso esikhethekile sesiphequluli.
Awudingi ukubhalisa bese uqinisekisa i-imeyili yakho ukuze ufinyelele ku-U LIVE.
Khokhela ukubuyekezwa kohlelo lokusebenza lwe-U LIVE
Sijabule ngaso sonke isikhathi ukusebenzisana nabashicileli bokubuyekezwa kohlelo lokusebenza nama-blogger. Sinikezela ngemibandela ekhethekile yabanikazi bamawebhusayithi abantu abadala abadumile. Silangazelele ukusebenzisana nawe!
Xhumana nathi: hello@ulive.chat
Zuza ngezixhumanisi ezinobudlelwano obunamandla
Mane uthumele isixhumanisi sakho sokuxhumana nomuntu uqobo lapho angathola khona ithrafikhi efanele. Izindleko zohlelo lokuxhumana oluhambelana nazo zonke izindleko ziqinisekisa ukuthi konke ukuthengiwe okwenziwe ukuthengiwe kuyakhokhelwa.
Mema amantombazane ukuba abe abasakazi be-webcam
Ozakwethu abasebenzisana nabo bakhiqiza inzuzo evela kubasebenzisi nakubasakazi. Amantombazane ethu e-webcam ayayazisa imigomo yethu yokusebenzisa izinto obala, ukuphuma kwemali futhi ukuthi asinazo izikhathi zokubamba imali ezicasulayo. Thatha ithuba lohlelo lwethu lobulungu be-webcam ngokumema abasakazo ukuthi bahlanganyele nathi. Thola i-10% yemali etholwe ngabasakazi bewebhu ngayinye oyisho!
Iya emhlabeni wonke nathi! Siwenze umkhiqizo wethu waba ngezilimi eziyi-17 ukusiza abasizi bethu ukugcwalisa imakethe ethile futhi benze kahle kakhulu ngaphandle kwezimbangi (noma imingcele).
Nika amandla umkhankaso wakho wokuthengisa we-CPA ngezinto zokwakha zethu zokuphakamisa i-Roulette yengxoxo ye-LIVE ngokuhambisana ngokuphelele nobunikazi bomkhiqizo